Fathom waa dukumiinti soo socda oo laga daawado Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Fathom waa dukumiinti soo socda oo laga daawado Apple TV +
Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee lagu garaaco adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa ah Fathoom, documentary labo saynisyahano ah oo bilaabay raadinta soo bandhigo qarsoodiga sababta nibiriyada u heesaan. Documentary-ga wuxuu ka bilaaban doonaa Apple TV + 25-ka Juun wuxuuna ku saabsan yahay heesaha nibiriyada badda ee loo yaqaan 'humpback' iyo isgaarsiintooda bulshada.
Saynisyahannada raacaya nibiriyada ku jirta dokumenterigan ayaa kala ah Dr. Ellen Garland iyo Dr. Michelle Fournet. Labadaba ugu safro dhinacyo kala duwan oo adduunka ah safar is barbar socda iyagoo doonaya inay si fiican u fahmaan dhaqanka iyo isgaarsiinta nibiriyada iyada oo loo marayo habka sayniska.
Dukumiintiga Fathom waxaa soo saaray Sandbox Film, Partners Impact, Walking Upstream Pictures, Back Allie Entertainment iyo Hidden Candy. Waxaa ka mid ah soo saarayaasha fulinta, Andrea Meditch, Abaalmarinta Emmy iyo Greg Boustead, oo isna fuliyaha soo saaray dukumintiga Fireball hadda laga heli karaa Apple TV.
In kasta oo sheekadu diiradda saareyso heesaha nibiriyada nibiriga ee humpback, haddana waxay u kuur galaysaa habka sayniska iyo nbaahida aadanaha ee caalamiga ah ee raadinta jawaabaha ku saabsan adduunka taas ayaa inagu xeeran.
Dokumentiyo badan oo dabiici ah
Iyadoo dokumenterigan, Apple wuxuu sii wadaa inuu ballaariyo buugga noocaan ah on your madal. Qaar ka mid ah dokumenteriyadii horey looga heli jiray Apple TV + waa:
Meeraha habeenkii: midab buuxa, taas oo ina tusaysa nolosha xoolaha ee habeenkii iyagoo adeegsanaya kaamirooyin casri ah.
Sanadkii dunidu isbadashay waxaa qoray David Attenborough wuxuu ina tusayaa soo noolaanshaha dabiiciga inta lagu jiro xirida
Microworlds, taxane dokumenti ah oo ina tusaya caqabadaha ay la kulmaan noolaha ugu yar aduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Fathom waa dukumiinti soo socda oo laga daawado Apple TV +
Apple TV + Filimkii Animated ee Wolfwalkers ayaa ku guuleystay shanta abaalmarin ee Annie
Abriil 20 dhacdo, cusbooneysiin isbarbar dhig ah, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac